La ikhona iRobben Island
Yibanganyana Ukusuka oGwini lwaseKapa
iRobben Island iyibanganyana nje ukusuka ogwini lwaseKapa. Imaqondana ne Table Bay, iBloubergstrand, iSea Point neCamps Bay, futhi ibonakala kahle ma uthe cababa e Table Mountain. Isebangeni eliwu 10 km ukusuka e V&A Waterfront bese iba la ko 7 km ukusuka osebeni lolwandle lwase Bloubergstrand. Nanxa iseduze neKapa, isiqhingi lesi sinemvelo yaso esehlukanisile ezweni laseKapa ngamakhaza aso nolwandle olunolaka. Yilengxubevange yempambankwici yokuqhela kwaso nokufinyeleleka eyenza iRobben Island yaba yijele elasetshenziswa.
Indawo ephakeme esiqhingini yintaba i-Minto, inde ngama metre awu 30 phezu kolwandle, ne lighthouse eheha amehlo engalapho. Nokujula kolwandle phakathi kwe Robben Island nenhlabathi esezweni kuwu 30 metres, hle hle isiqhingi sihlanganiswe yinhlabathanyana ewumgudu ophansi okuholela ezweni.
Indlela eyiyo yomuzwa we-Robben Island wukuyihamba ngonyawo uqobo. Ngaba nenhlanhla ukunikwa lelothuba, futhi ngithanda ukusho ukuthi ukujikeleza iRobben Island yaba ngeyinhlabamxhwele kakhulu....more
Namhlanje, lendawo isilikhaya kubantu abayizakhamuzi impilo yabo yonke abawu 150. Kubo kunezisebenzi zenqolobane yomlandu, abakukhombisa ngejele, abakwa National Ports Authority, abaqaphe i Lighthouse...more
Izivakashi zivumelekile ukudlula ejele zithwebule izithombe, kodwa izithombe zingebuchaze ububi obuhlasimulisayo begumbi lejele ngokwanele. Hle hle kunzima ukuqonda ukuthi umuntu ogqonywe kulendawo angavuka abe nenhliziyo evuleleke kangaka....more
Amazwibela ohambo oluyisikebhe ukuya esiqhingini. Lesikebha sithatha imizuzu ewu 30 ukuya nokubuya, lapho-ke ukubuka iKapa neTable Mountain inhle ni!...more
Umjikelezo wokuyibuka uthatha amahora amathathu kuya kwamane, ukuhlanganisa nohambo lwesikebha....more
Emva kohambo lwebhasi, izivakashi zishiwa esangweni lejele ukuba ziqale uhambo oluyincindezi yomphefumulo....more
Ngo 1948 Inhlangano YamaNational yawina ukhetho (kubelungu) lukazwelonke kanti kwabe sekususwa no-Smuts emandleni....more
Izimo zasesiqhingini ngeminyaka yo 1700 kunzima ukuyibamba kahle ngenxa yokuthi kakukho okwalotshwa phansi kanjalo nemiqopho yezakhiwo, nokho umuntu kuyamcacela kwakwushubile khona....more
Ngo 1986, imithetho eminingi neyabe iyizinsika zobandululo yaseshulwa, njengaleyo yokunqabela abobuzwe obuhlukene ukushadana nalowo owabe wenyanyeka kakhulu wamapasi....more
Abaholi nababemele i African National Congress babe ngabakoqala ukuboshwa. Babe sebelandelwa ngababemele izinhlangano ezazimelene nombuso, ababoshelwa amanqina enyathi qede batakishwa bayogqonywa eRobben Island ukuze bangabe besabanga uchuku....more
I-Robben Island yaqala ukusetshenziswa ngabaseEurope, yayiba yisitobhi esiwusizo kubashayeli bemikhumbi nxashana besendleleni ebheke Empumalanga....more
Isiqhingi lesi sishisa okwesihogo ehlobo, besesiba yiqhwa ebusika. Phambi kokufika koluntu esiqhingini, uhlaza lwakhona kwabe kuwutshani imvamisa nezihlahlanyana ezincane....more
Ukuphawuleka Ngokomlandu kwe Robben Island
Idume kakhulu ngokuthi indawo uNelson Mandela achitha kuyo impilo yakhe cishe yonke eminyakeni ewu 30, i-Robben Island enokuningi okuphawulekayo ngayo eNingizimu Afrika....more
Ubuchule noheho lwesu lokwakheka kwe Gateway abenziwanga ngaphutha. Ubheke kwistezi samatshe esivulekile bese uhambe eminyango yamagilasi emide, yilapho kanye okusuke uhambo lwakho lwe Robben Island seluqalile....more
iRobben Island yabe iyindawo efanelekile ukuhambisa kuyo abagula ngengqondo, nabanezifo ezingalapheki abangenamali, ababezoletha ingcindezi kwizakhamuzi zase Ningizimu Afrika....more
Iminyaka esuka ku 1936 kuya ku 1960 yayingeneqholo ngempilo ende yobunzima bempilo yasesiqhingini....more
Ngavakashela iRobben Island ngo 1989, njengengxenye yohambo olwalukhethekile lwesikole. Yayiseyijele elisebenzayo ngalezozinsuku, engikukhumbulayo yayindawo emnyama nendawo yokulahlwa enesithukuthezi sokuphelelwa yithemba emoyeni owusawoti....more